FormSpring ဖြင့်ပုံစံများကိုတည်ဆောက်ခြင်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 2, 2007 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 19, 2013
ဒီနေ့ post ကိုသူငယ်ချင်းနှင့် Blog ည့် Blogger မှလာသည်။ Ade Olonoh ဖြစ်သည်:
အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်သင်အွန်လိုင်းပုံစံတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကူညီမယ့်ကိရိယာတစ်ခုကိုရှာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘလော့ဂါတစ် ဦး ဖြစ်ပါကပုံမှန်တုန့်ပြန်မှုပုံစံမှသင်ရနိုင်သည်ထက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအရာတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းများကိုစုဆောင်းခြင်းအတွက်ပုံစံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲကြောင်းသင်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့စာပုံးထဲမှာရှိတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့အီးမေးလ်တွေကနေတန်ဖိုးတစ်ခုခုရဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ အောင်မြင်သောအွန်လိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏ရလဒ်အဖြစ်။ ၀ န်ခံပါ - သင်သည် HTML ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ပင်တည်ဆောက်ခြင်းပုံစံများ၏ငြီးငွေ့ဖွယ်အလုပ်ကိုသင်မုန်းသည်။
သင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် နွေ ဦး ရာသီမည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုမဆိုအသုံးပြုသူများသည်အွန်လိုင်းပုံစံများကိုအလွယ်တကူတည်ဆောက်နိုင်စေပြီးဖောက်သည်များထံမှသင်ရရှိသောတင်ပြချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းကိုမူလက ၂၀၀၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်းယခုအပတ်တွင်ဗားရှင်း ၂.၀ ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
FormSpring ၏ဂုဏ်အသရေမှာ HTML (သို့) scripting code ကိုအသုံးမပြုဘဲအွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်ပုံစံ၊ စစ်တမ်းသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ပုံစံကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ IT မှတစ်စုံတစ် ဦး ကိုဖုန်းခေါ်စရာမလိုဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိရသောအခါသင်စိတ်သက်သာရာရနိုင်သည်။
ဤတွင်ပုံစံတည်ဆောက်သူမျက်နှာပြင်၏ဖန်သားပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ပုံစံများကိုဆွဲယူခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပုံစံကိုတည်ဆောက်သည်၊ သင့်ပုံစံကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သင်၏ပုံစံကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သင်၏အသုံးပြုသူများထံသို့ပေးပို့ရန်လင့်ခ်တစ်ခုကိုကူးယူ။ ကူးထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်ထည့်နိုင်သော HTML ကုဒ်တစ်ကြောင်းကိုဖမ်းနိုင်သည်။ ဤအချက်နှင့်ပါတ်သက်သည့်အချက်မှာသင်၏ပုံစံကိုသင်၏လက်ရှိဒီဇိုင်းနှင့်လုံး ၀ ပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
တင်ပြချက်များကိုအီးမေးလ်အသိပေးချက်များသို့မဟုတ် RSS ထည့်သွင်းမှုမှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ရလဒ်များကိုသင်အဆင်သင့်လုပ်ပြီးတာနဲ့တင်သွင်းမှုတွေပါတဲ့ Excel spreadsheet ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဒေတာတွေကို database သို့မဟုတ် CRM system ထဲကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့သင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအများစုကိုပေးသောအခမဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ကြီးမားသောအသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကလခပေးသောအစီအစဉ်များသည်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့် setup အခကြေးငွေများမရှိဘဲဒေါ်လာ ၅ / တစ်လစတင်သည်။
စမ်းကြည့်ပါ ဦး အပြည့်အဝသရုပ်ပြ, အပေါငျးတို့သအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ အင်္ဂါရပ်များဒါမှမဟုတ် အခမဲ့အကောင့်အတွက်စာရင်းသွင်းပါ.
ငါ့ကိုသတ်ခြင်း (ဘလော့) ညင်သာစွာ
Todd Harrison - LA Headshot ဓါတ်ပုံ
2:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 52
ကျွန်ုပ်တွင်အတိတ်ကာလ၌ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အီးမေးလ်ရာပေါင်းများစွာနှင့်ရာနှင့်ချီသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရရှိခြင်း၌အခက်အခဲအချို့ရှိသည်။ ဒီအသံကငါ့လုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုလို တစ်လကို ၅ ဒေါ်လာတန်တာမဟုတ်ဘူး။
Dave ဂျေ (Scoop0901)
3:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 47
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်တဲ့အခါငါဆိုဒ်တစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ site မှာအသုံးပြုဖို့ဖောင်ပုံစံတစ်ခုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်, ငါ link ကိုပေးပို့ဖို့သွားခဲ့သည်လူအတော်များများရှိခဲ့သည်အဖြစ်, ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပုံစံတစ်ခုဖန်တီးရန်သွားမည်ဆိုပါက၎င်းသည်ပုံစံ၊ ကုဒ်သွင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာကိုအသုံးပြုပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုညွှန်ကြားချက်များပေးလိုပါသည်။
စီးပွားရေး၌တစ်ချိန်ကမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်သည်မဆိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သောဆာဗာများပေါ်တွင်အထူးသဖြင့်ပုံစံများနှင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံများအတွက်ဖြစ်သည်။ !?! အိုး! - အခြားကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာတွင်ထိုင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ထိုကုမ္ပဏီသည်နေ့ချင်းညချင်း (၀ န်ဆောင်မှုကိုသတိပေးခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားသည့်မကြာသေးမီက VoIP ကုမ္ပဏီကိုစဉ်းစားပါ) သင်ဆုံးရှုံးသွားသည်။
ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ။ တစ်လကိုငါးဒေါ်လာလောက်တော့မများပေမယ့်ကျွန်ုပ်မှာ hosting package တွေအများကြီးရှိပြီးအဲဒီ packets တွေရဲ့ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်ကတော့တစ်လကိုဒေါ်လာ ၁၉ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေါ်လာ ၁၉ အတွက်ဒိုမိန်းအမည် ၆ ခု၊ နေရာ ၃၀၀ ကျော်၊ ပုံစံများနှင့်အခြားကိရိယာများအားလုံး (ကျွန်ုပ်မထိမိပါ) နှင့်ကန့်သတ်မဲ့အီးမေးလ်နာမည်အတုနှင့်အီးမေးလ် ၂၀၀၀ အခမဲ့ရတယ်။ ဘာမှမမှလာမယ့်အဘို့အခြား 19 ထည့်ပါ။
ပုံစံတစ်ခုကိုကုတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမိမိလူမျိုး မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သင့်သည်။ FormSpring ဆာဗာကိုဖောက်ထွင်းခံရပါကထိုကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်များနှင့်မျက်နှာပျက်နေသည်။ ခေါကိုဖြတ်ပြီး "ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကိုငါတို့ပံ့ပိုးသူကလုပ်ခဲ့တယ် ... " ဟုပြောခြင်းသည်ဆင်ခြေမကောင်းပါ။